Maleeshiyaadka Shiicada Iran ayaa Burburiyay Magaalada Xalab
Mucaaradka ayaa ku hanjabay in aysan xaadiri doonin shirka ka dhici doono wadanka Kazakhistaan ee awoodda ay ku qeybsanayaan iyaga iyo nidaamka Bashaar Al-asad.
Saraakiisha Mucaaradka waxay sheegeen in maleeshiyaadka shiicada iiraan iyo ciidanka Nidaamka Bashaar Al-asad ay dhul hor leh qabsanayaan duleedka magaalada caasimadda ah ee Dimishiq.
Waxay sheegeen in mandiqadda Waadi Bardah ay kajirto xaalad Bani’aadanimo kadib markii dadka deegaanka ay duqeymo ba’an kala kulmeen maleeshiyaadka isbahaysanaya.
iiraan ma ogolaanayso in ay awood qeybsi uu ka dhaco wadanka Suuriya sidaas waxaa lagu yiri war kasoo baxay xukuumadda Tahran.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in wararka sheegaya awood qeybsi lagu gorfaynayo shirka ka dhici doono magaalada astiina ee wadanka khazakhistaan oo laysugu keeni doono mucaaradka dhax dhaxaadka ah iyo nidaamka suuriya uu yahay mid aan la aqbali Karin.
Mas’uulkan shiiciga ah ayaa arrinkaasi ku tilmaamay war aan macna laheyn oo aan wax kasoo qaad laheyn islamarkaana siyaasadda maamul ee Suuriya uu taban taabin doono Xasan Ruuxaani.
Faadima Alsamaadi oo ah khabiirad ku takhasustay arrimaha iiraan ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay fariin adag oo ay Tahran udirayso caalamka taasi oo ku aaddan in marnaba aysan ka gorgortamayn arrinta suuriya oo ay awoodeeda ku baahinayso dhulalka muslimiinta suniyiinta.
islamarkaana ay lacago malaayiin ah ku qarash garayso dagaalka suuriya oo ay ku weysay kumanaan katirsan khubaradeeda melleteriga bishii july ee lasoo dhaafay jeneraal Raxiim safawi oo ah la taliyaha Xasan Ruuxaani ayaa talefeshinka xukuumadda ka sheegay in iiraan aysan ogolaanayn in ruushka iyo mareykanka ay arrimaha suuriya gacanta ku dhigaan.
Qabsashadii magaalada Xalab kadib ayay Ruushka iyo iiraan isku hayaan arrimaha maamulka iyo siyaasadda wadankaasi, Iiraan ayaa la rumeysanyahay in dagaalka Suuriya ay uga qeyb qaadanayso ku dhawaad 100-kun oo dagaalyahano shiico calooshood u shaqeystayaal caalamka lagasoo aruuriyay.